Mozilla inopisa timu yeFirefox OS | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inopisa timu yeFirefox OS
Chokwadi idzi nhau dzakwezva kutariswa kwevazhinji vaifunga iyi yemahara inoshanda sisitimu yevakafa. Uye chaizvo, Firefox OS yanga isina kufa asi yanga yasiya mushamba we mobile.
Kubva pane chiziviso kusvikira zvino, Firefox OS nevagadziri vayo ivo vaive vazvipira pachavo kuunza iyo inoshanda system kune Smart TVs uye Internet yezvinhu, asi zvinoita sekunge kunyangwe nemisika mitsva yanga isingakwanise kuchengetedza ino sisitimu inoshanda.
Nhasi takazviziva izvozvo Mozilla yadzinga timu yese yeFirefox OS. Chikonzero cheichi shanduko yezvido muMozilla. Zvinoenderana nezvataurwa izvi, Mozilla yakasiya vezvekutengeserana kuti vazvipire mukutsvagisa, ndiko kuti, haizounze zvigadzirwa zvayo kumidziyo kana kuvhura zvigadzirwa zvayo uye ichazvipira mukugadzira matekinoroji nezvirongwa. Iyi shanduko muzvirongwa inounza pamwe kwete kwete chete kubviswa kwevanogadzira asiwo kubviswa kwezvose izvo zvigadzirwa zvine kana zvaizove neFirefox OS mukati.
Chikwata cheFirefox OS chinozopedzisira chasiya chirongwa ichi
Izvi handizvo chete zvakaitwa naMozilla kwemavhiki mashoma apfuura. Iyo logo yave iri imwe yezvinhu zvitsva izvo Mozilla Yakagadzira, pamwechete neayo nyowani bhurawuza, yakavandudzwa Firefox iyo ichaburitswa mukati megore rino.
Dzese shanduko idzi dzinoratidza kuti Mozilla nebrowser yayo haisi kuenda panguva dzakanaka, chimwe chinhu chakaratidzwa nevashandisi kwenguva yakareba asi kufamba uku hakuregi kushamisika.
Ini pachangu, nhau idzi hadzindishamise zvachose nekuti kubva panguva kubva chiziviso kusvika zvino hapana zvataurwa nezvazvo uye izvo hazvina kugara zvakanaka. Nekudaro, Firefox OS ndeye Mahara Software uye zvinoreva izvo isu tinokwanisa kutora kodhi uye tinogadzira yedu mbozhanhare inoshanda sisitimu kana kuendesa kune mamwe madivayiri eApple. Zvino zviri kuMunharaunda kuti zviite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla inopisa timu yeFirefox OS
Mozilla, wanga uchifunga nezvei iwe pawakawana pfungwa yekuti imwe sisitimu yekushandisa yaizoshanda mumusika ... Kune maOS akawanda kwazvo pamusika uye chishuwo chidiki chevagadziri kuti vagare vachidzokorora.
Iko GNU / Linux inoshanda zvakanyanya kupfuura Windows maererano nekushandisa RAM?